[08 / 12 / 2019] Kuchave nechitima chechitima kuGürsu mudunhu reBursa?	16 Bursa
[08 / 12 / 2019] Chitima chipi ku Bursa?	16 Bursa
[08 / 12 / 2019] Bandırma Railway Line iri paiyo Investment Agenda	16 Bursa
[08 / 12 / 2019] Bursa High Speed ​​Chitima Project kuti Imukirwe nemari Yekunze Yechikwereti	16 Bursa
[08 / 12 / 2019] TÜVASAŞ 2020 Trainee Spring Chiziviso Yakaziviswa	54 Sakarya
RayHaber Tikugashirei Webhusaiti,
Iyi inotevera "Chibvumirano chekuvanzika", RayHaberinopa kupiwa kwemashoko uye masevhisi anopihwa kune vatengi vedu vanokoshesa.
RayHaberDai tashandisa ruzivo rwunounganidzwa kubva kune vakanyoreswa uye vashanyi vashanyi vanoshanyira Webhu saiti kune chero mhando yekuongorora. RayHaber govana ruzivo urwu nevashandi vebhizinesi. Nekudaro, email nehumwe ruzivo rwega pachako hazvingagovaniswe nechero bhizinesi shamwari, kambani, sangano kana rimwe sangano pasina mvumo yemushandi
RayHaber e-mail, zita, surname, nhamba dzerunhare uye chero ruzivo rwakapinda panguva yekunyoreswa harungazoburitswe paWebhu saiti yevanonyoresa uye vashanyi vashandisi;
RayHaber 3 ichangoburitsa pachena ruzivo rwako pachako pasi pemamiriro ezvinhu epamutemo anotevera nemabatiro ari pamutemo. kuvhura mapato.
a.) Kana pane chikumbiro chakanyorwa kubva kuvakuru vezvemitemo,
b.) RayHaberkuchengetedza uye kuchengetedza kodzero dzezvivakwa zve
c.) Maererano nemitemo yaunogamuchira pasi pemitemo yekushandiswa.
RayHaberRuzivo rwako pachako rwakachengetwa mukati runongoonekwa newe chete. Ruzivo urwu harwutengeswi, kubhadharwa kana kuchinjaniswa nerimwe sangano kana sangano. Kunze kwekunge zvapihwa mune ino "Confidentiality Agreement", 3. kwete kugoverwa nevanhu vamwe navamwe. RayHaber inotora matanho ese anokwanisa kuzadzisa mamiriro akavimbiswa muchibvumirano ichi.
RayHaber ruzivo rwakachengetwa munzvimbo isiri yeruzhinji. RayHaberinoshandisa ese marudzi eindasitiri zviyero kuchengetedza ruzivo mune zvakatipoteredza.
Iwe une kodzero yekuvandudza uye nekushandura chero ruzivo rwemunhu iwe rwaunopinda panguva yekunyoresa chero nguva. RayHaber ane kodzero yekudzima kana kumisa account yako kana ukatadza kutevedzera ichi "Confidentiity Agreement" uye "Service Chibvumirano".
Nekuda kwechimiro cheInternet, ruzivo rwacho runogona kutenderera paInternet pasina matanho akaringana ekuchengetedza uye anogona kugashirwa uye kushandiswa nevanhu vasina mvumo. Kukuvadza kunokonzerwa nekushandiswa uku uye kushandiswa RayHaberharisi iro basa re.
Mune zvimwe zviitiko, ruzivo rusina ruzivo runogona kuunganidzwa. Muenzaniso uyu mhando mashoko uchishandisa Indaneti Browser 's mhando, rako uchishandisa hurongwa, iwe kusvika Website yedu nokubatana kuti nzvimbo kana umambo zita kuti apiwe.
Mashoko anogona kuiswa pamakombiyuta yako paunoshanyira Site. Iyi ruzivo ruchava mune faira cookie ada format kana faira yakafanana uye ichatibatsira nenzira shomanana. Semuenzaniso, makiki achatibvumira kuronga masayiti nekutengeserana maererano nezvido zvako uye zvaunoda. Inenge yose yeInternet browsers ine maitiro ekubvisa makiki kubva kuibhuku rako rakaoma, kudzivirira kuti vasanyorwa, kana kugamuchira shoko renyevero risati raponeswa. Ndapota tsvaga mafaira ekubatsire web browser yako uye ruzivo rwekushandisa kuti uwane mamwe mashoko.
IP yako kero inoshandiswa kuchengeta Web Site uye mashumiri edu achienderera mberi, kutarisira nekugadzirisa zvinetso. Your IP address is used to identify you.
Iyi Websaiti yepaIndaneti inopa mazano kune mamwe mawebsite. Kuvanzika kunoshanda chete muIndaneti ino uye haina kuvhara mamwe mawebsite. Iyo Purogiramu Yebumbiro neMitemo yekushandiswa kwemasayiti akaenzana nekushandiswa kwehungano pawebsite ino uye mamwe mawebsite anoshandiswa anoshanda. Zvinokurudzirwa kuti uverenge Mutemo Wechirongwa neMagwaro Ekubatsira kwemasayiti aya kune mamwe mawebsite unofamba neichi chikwata kubva paIndaneti.
pachako kana kambani mashoko vatengi dzedu 'kushandisa kwezvivako yedu, email kero, nhamba kwenzvimbo mushanyi Profiles nenzira kumbobvira yakadyidzana kumapati rechitatu.
Mitsara yePasitori inochengetwa yakavanzika kunze kwekuti zvikumbiro zvingagadzirwa nemagariro ehurumende (Purezidhendi weHurumende, Security Informatics Bureau). Kutsvaga matanda zvakachengetwa mumazuva e180.
Yevashanyi mhinduro, ruzivo rwevashanyi, shanya ruzivo (IP, timestamp, useragent) dzinochengetwa chakavanzika kusanganisira yeNew System vashandi.RayHaber inochengetera kodzero yekuchinja chero ruzivo ruri murugwaro urwu. Nekushandisa saiti ino, unofungidzirwa kuti unogamuchira chero shanduko kune ino "Vimbiso Yakavanzika".
Makopi emhando dzose dzezvakadai sedzakodhi, nhau, mifananidzo, kubvunzana RayHaber.com. RayHaberZvese zvinyorwa, zvishandiso, mifananidzo, mafaira ekuteerera, mifananidzo, mavhidhiyo, zvigadzirwa uye urongwa pane .com saiti yakachengetedzwa nemutemo wekopi 5846. izvi RayHaber.com inogona kunge isiri kukopwa, kugoverwa, kushandurwa, kushambadzirwa chero nenzira pasina mvumo yakanyorwa ye .com. Kutevedzera uye kushandisa hazvigone kuitwa pasina mvumo uye pasina kududzira kwainobva.
RayHaberZvekunze zvinongedzo pa .com zvakavhurwa pane rakaparadzana peji. Vanyori vane mhosva yezvinyorwa zvakaburitswa uye makomendi. RayHaber.com inogona kuchinja chero nguva pasina ziviso. Isu hatisi mhaka yezvikanganiso chero zvipi zvinokonzerwa neruzivo pane ino saiti.
Zvese zvinongedzo zvekunze pane saiti zvakavhurwa pane zvakasiyana peji. RayHaber.com haina kutora basa rekunze zvinongedzo.
RayHaber inoremekedza kuvanzika kwako iwe nevashanyi vako uye inovimbisa kutevera mitemo yakarongwa mune inotevera.
© Copyright 2019 RayHaber.com
Railways State Policy ne Ak Party ...
Njanji dzakashandurwa kuva nyika mamiriro…
Gurukota Arslan: "State Policy pane Railways"
Railway yakava State Policy
Kastamonu castle-Clock Tower Cable Mota Inotakura Inin
TCDD uye TCDD Transportation Inc. Kutanga Kuwana pakati…
Chibvumirano che 1915 Çanakkale Bridge chakasayirwa
27 muTevenus Industry. Term Collective Bargaining Agreement Yakanyorwa
Şanlıurfa-Gaziantep Yekumhanya Yekumusoro Yechitima Chibvumirano Chitauro…
Collective Labor Agreement Yakanyorwa pakati peMOTAŞ naHak-İş
Sapanca Teleferic Project Contract Ichatsinhirwa Nhasi
Kushandiswa kweContracting of Alaçatı Airport Yakanyorwa
Yakabatanidzwa Yekuita Chibvumirano Pakati peSamulaş neDemiryol-…ş…
Collective Bargaining Agreement Yakanyorwa muIZBAN
Aselsan Zviratidzo 110 Million Pounds Metro Contract
Nhasi Munhoroondo: 9 Zvita 1871 Edirne nenzvimbo dzakatenderedza
Izmir Metro Maawa
Kuchave nechitima chechitima kuGürsu mudunhu reBursa?
Chitima chipi ku Bursa?
Bandırma Railway Line iri paiyo Investment Agenda
Bursa High Speed ​​Chitima Project kuti Imukirwe nemari Yekunze Yechikwereti
More 27 Bhazi kuenda ku Şanlıurfa Public Transport Fleet
BUDO Rakava zita Sponsor weGemlik Basketball Club
Kuvaka Catalog Kusaita Basa Pamhepo!
Ankara Batikent Metro Mepu Maitiro uye Tiketi Mitengo
Ankara Kecioren Metro Mepu Maitiro uye Tiketi Mitengo
Nhasi muNhoroondo: 8 Zvita 1874 Agop Azarian Kambani
Eti mine inoshanda General Directorate ichazotora vashandi vakaremara
Zonguldak Bülent Ecevit University inotora vashandi vedzidzo
İstanbul Yunivhesiti Cerrahpaşa contract Vashandi
Istanbul University inotora vadzidzi vevadzidzi
Ege University ichatora vadzidzi vevadzidzi
Ankara Metro Kuchenesa Vashandi Yekutanga Nguva Seminar
OPET iri paRetail Mazuva ane Ultramarkets